Velcro Discs uye Psa Discs
nakisa guru vendu-kure mavhiri
Non-rakarukwa nokukurumidza chinja discs
nokukurumidza chinja mabhatani
Ceramic hasha zviyo
hypodermic tsono nokugeda
1.Characters pamusoro CA chinoitirwa Sol-gel nzira
CA, zvinoberekwa Sol-gel nzira, rudzi sintered hasha mbeu. Saka anonziwo sezvo SG hasha zviyo. The sekristaro divi iri dikisa, riri chete 100-500nm, uye kunongova shoma chete-muzana zvakajairika corundum sekristaro saizi. A chidimbu 46 # tsanga rine mabhiriyoni sekristaro inoramba. Kana vachikuya, sejecha zvetsika zvemagetsi fused alumina kuva sandarara uye deactive, uye nyore nyore kubva hasha zvishandiso pasi kukuya simba. upenyu Its basa rakapfupika. Zvisinei, nokuti CA, kureva SG hasha zviyo, yose kupfeka muitiro iri zvaro kuzvipira arodzwe muitiro. Mumakore ayo upenyu basa, idzva unopinza vachikuya unopinza pachena nguva apo passivating wakanaka sekristaro tsanga kuuya kubva vachikuya zvishandiso pasi ngaakuyire simba, iyo inoita tsanga nguva dzose muna unopinza hweHIV. Saka, hasha zvishandiso chakaitwa CA vane refu upenyu bhendi, hwakanaka kuzvipira arodzwe kugona, mukuru nokuveza kushanda, uyewo haana kutsva workpieces.
Nokuda kwayo dzakasiyana microstructure, CA zvinoratidza musiyano uri hasha tsanga kutsemuka maitiro. CA rinoratidza nenzira sekristaro kutsemuka zvaparadzwa, apo zvetsika zvemagetsi fused alumina zvinoratidza transgranular kukuvara kutsemuka. Naizvozvo, kuti kuoma kwakaita CA ndiko kaviri kupfuura nevakawanda fused alumina.
CA zvinoberekwa Sol-gel nzira ine makemikari anoumba zvakafanana neukukutu kuna WFA (White Fused Alumina). Nokuda kwayo yunifomu duku microcrystalline mamiriro, mukuru kusimba uye duku akaputsika chaitwa, CA inogona kushandiswa chaizvo ngaakuyire mumwe zvakaoma-to-muitiro zvokuvakisa kufanana chokushandisa simbi, oma Stainless simbi, kupisa nemishonga chiwanikwa simbi, etc.
2.Features vane hasha zvishandiso kwakaitwa CA
(1) The tsanga yakapinza chaizvo, izvo zvinoita kuti rine simba nokuveza chinzvimbo, mukuru nokugeda kunyatsoshanda. Rinogona kushandiswa guru rakadzika nokuveza, roughing zvokudya, rinorema basa uye yakakwirira kunyatsoshanda nokugeda. Maererano kuedza, vasina muitiro dzichifura anogona kusvika 0.3mm kana kupfuura, kubviswa simbi mwero inopfuura kaviri nevakawanda corundum nokugeda mavhiri.
(2) kuoma Good, diki abrasion, nokurumanya mavhiri nezvakanaka chimiro chengetedzo. Nokuti zvakarurama nokugeda uye chimiro kukuya, wakakwidzwa ndeiya yakaita zvakarurama uye saizi chimiro kusachinja-chinja hunogona kungoparara akamuka.
(3) High mukurumari uye upenyu basa refu. Inogona kusvika 5 to10 nguva zvakafanana corundum nokugeda mavhiri. Low yokutsiva maitikiro kunogona kuderedza ebetsero kubudiswa nguva uye downtime, izvo zvinoita kuti inoita kuti kushandisa nhamba kuzvidzora otomatiki muchina, tichiziva otomatiki kugadzirwa.
(4) Good kuzvipira arodzwe waivako, kwete clogging. Inogona chengeta rakadzikama nokugeda waivako, kuderedza kururamiswa (chete anenge 1/3 zvinowanzoitwa corundum nokugeda mavhiri) uye kuvandudza kugadzirwa kunyatsoshanda.
(5) Muna vachikuya waivako, CA kukuya mavhiri vari nani pane zvakafanana corundum nokugeda mavhiri. Nokuti mutengo, CA dererei zvikuru pane CBN uye nedhaimani abrasives, apo kwayo zvakaoma hakuna akafanana nevakawanda fused alumina, izvo zvinoita hedu inokosha nokugeda equipments uye kugadzirisa namano. Saka hakuna anokosha zvinodiwa kuti kukuya equipments uye hapana rokugadzira matambudziko zvichienzaniswa CBN uye nedhaimani abrasives. Rinewo hapana chinokosha zvinodiwa kuti kukuya Urume. Saka, zviri nyore kuti kuparadzira kushandiswa kwayo.
1.Chemical Zvinoumba (Typical ukoshi):
arambe achirema (g / cm3) Ball Kukuya kusimba Crystal Size
Previous: zvakarurama nokuveza mavhiri
Blue Ceramic hasha Grain
Sg hasha Grain
White Ceramic hasha Grain
Black nesilicon Carbide (C)